१५ घण्टासम्म बुवा आमाको शव घरमै, युवकले पाएनन् कसैको सहयोग : श्रीमती समेत भेन्टिलेटरमा – Classic Khabar
कोरोना भारतमा अहिले निकै समस्या उत्पन्न गराएको छ । संक्रमितले उपचार त पाउन सकेका छैनन् निधन भएकाहरुको पनि अन्तिम संस्कारका लागि परिवारले निकै संघर्ष गर्नुपरेको छ । मानिसहरू यति डराउँछन् कि तिनीहरू विपत्तीको समयमा कसैलाई पनि मद्दत गर्न तयार छैनन्। भारतको बुरारी क्षेत्रमा लक्ष्मण तिवारी नाम गरेका एक युवकलाई पनि यस्तै भएको छ। उसको सम्पूर्ण परिवार कोरोना संक्रमित भयो। केही घण्टामै आमा बुबा दुवैको मृत्यु भयो, श्रीमती अस्पतालमा आफ्नो जीवनको लागि संघर्ष गर्दैछन् ।
Prevपूर्व इटहरीवाट पोखरा आएर होटलमा बसेका एक जोडी नर्सरीमा एउटै पा सोमा भेटीए (भिडियो हेर्नुस्)
Next२ दिन नहुँदै काठमाडौं उपत्यकामा लगाएको नियम ठिक नलागेपछि प्रसासनले नियमलाइ सच्च्याउदै जारि गर्यो नयाँ बिज्ञप्ति, बनाइदिने भयो सहज ! अब के गर्न पाइन्छ के पाइदैन ?
दसैं मान्न घर गएका एक जना नदिमा बेपत्ता अर्काको शव फेला पर्यो